Weerar takoor ah oo lagu qaaday maanta oo Isniin ah dugsi Islaami magaaladda Amsterdam - Horn Future
Amsterdam (Horn Future)-Koox ka tirsan kooxaha xagjirka midigta ayaa waxay weerar ku qaadeen maanta oo Isniin ah dugsi Islaami ah maalintii ugu horeeysay ee sanad-dugsiyeedka magaaladda Amsterdam.
Wakaaladda wararka ee Anadolu ayaa sheegtay xubno ka tirsan kooxda (Ed Verzit) ee xagjirka midigta-fog ayaa fuulay saqafka sare ee dugsi sare ee( Cornelos Haga School) bilawga maalintii ugu horeeysay ee waxbarashada iyago oo sudhay maro ay ku qoreen erayo xambaarsan takoor.
Agaasimha guud ee dugsigan oo waraysi siiyay wakaaladan ayaa waxa uu yidhi “Waxay yimaadeen aroortii hore,waxana ay kor u qaadeen maro,iyaga oo bilaabay inay ku qayliyaan ardayda iyo macallimiinta,iyaka oo leh” Waxaad tihiin argagixiso, “.
Waxa laba maalmood ka hor koox xagjir ah ay weerartay masajidka Tawxiid oo wali dhismihiisa uu wado waqfiga diinta ee Turkey ee magaalada Venlo ee bariga dalka.
« Why Aung San Suu Kyi’s Nobel Peace Prize Won’t Be Revoked	» Trump oo joojinayo barnaamijka oggolaanaya inay sii joogaan boqolaal kun oo qaxooti ah